အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှအခမဲ့မိဘများ '' လမ်းညွှန်
သတင်းဘလော့ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှအခမဲ့မိဘများ '' လမ်းညွှန်
adminaccount888 10th ဇန်နဝါရီလ 2020 ပညာရေး, ကျန်းမာရေး, နောက်ဆုံးရသတင်းများ
မိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများသည်အရေးကြီးဆုံးသောစံပြပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကလေးများအတွက်လမ်းညွှန်မှုရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တစ်ဝိုက်တွင်ကလေးများသည်လိင်အကြောင်းအထူးစိတ်ဝင်စားလာကြပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သမျှလေ့လာလိုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သဘာဝ၏နံပါတ်တစ် ဦး စားပေးလုပ်ငန်းသည်မျိုးပွားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ရန်အစီအစဉ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကလေးများသည်အဖြေများရှာဖွေရန်အင်တာနက်သည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
အခမဲ့၊ streaming များ၊ အမာခံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသည်သမိုင်းတွင်အကြီးကျယ်ဆုံး၊ စည်းမျဉ်းမရှိသောလူမှုရေးစမ်းသပ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်များသည့် ဦး နှောက်ကိုအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူအမျိုးမျိုးကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ အကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်ဤတိုတောင်းသောဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် တစ် ဦး neuroscientist ထံမှမိဘများအဘို့အကွံဉာဏျအတူ။
ဒီကိုကြည့်ပါ နံရံကပ်ကြော်ငြာ အလွန်အကျွံသုံးစွဲ၏အများဆုံးခါတိုင်းလိုအကျိုးဆက်များအကျဉ်းချုပ်သည်။
အကြီးဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက် Pornhub ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှု၊ ညှို့ယူနှိပ်စက်ခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ Incest အဆိုအရအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် Pornhubကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းများ ၎င်းသည်အများစုသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသုံးစွဲရန်လွယ်ကူသည်။
ဒီ2မိနစ်, တောက်ပ ကာတွန်း အမြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများမပါသည့်အတွက်သင်ကသင်၏ကလေးများကိုလည်းပြနိုင်သည်။
ဤ5မိနစ် ဗီဒီယို နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် neurosurgeon သည် ဦး နှောက်တွင်အဘယ်သို့ညစ်ညမ်းမှုစွဲနေကြောင်းကိုရှင်းပြပြီး၎င်းသည်ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုနှင့်မည်မျှဆင်တူသည်ကိုပြသသည်။
ပါမောက္ခ GAIL ထမင်းစားခန်းဖွငျ့ဤ TEDx ဟောပြောပွဲ "တစ်ဦး pornified ယဉ်ကျေးမှု၌ကြီးပြင်း” (13 mins) သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာပုံသဏ္musicာန်ကိုဂီတဗီဒီယိုများ၊ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လူမှုမီဒီယာများကမည်သို့ပုံသွင်းနေသည်ကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြထားသည်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးရယ်စရာ Tedx (16 မိနစ်) "ဟုခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုမယ့်ဘယ်လို Porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြျှောလငျ့ Skews"တစ်ဦးအမေရိကန်မိခင်နှင့်လိင်ပညာပေးခွငျးအားဖွငျ့ Cindy ပီယပ်။ porn နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ကလေးတွေနှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောချတ်ဒါလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားရရှိသွားတဲ့အဘယ်ကြောင့်သူမရဲ့မိဘများ '' လမ်းညွှန်ကပြောပါတယ်။ သူတို့အားပြောဆိုမှုများရှိသည်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုအရင်းအမြစ်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကြည့်ရှုပါ။
ခြောက်နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုနေကြသည်။ အချို့ကလေးများသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားကြပြီးပိုမိုရှာဖွေလိုကြသည်၊ အချို့မှာစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အိပ်မက်ဆိုးများရှိသည်။ Hardcore အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းသည်မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုကလေးများအတွက် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်နှင့်မသင့်တော်ပါ။ ဒီမှာ အစီရင်ခံစာ 2017 တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ“ စောင့်ကြည့်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ” သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏တန်ဖိုးများ၊ သဘောထားများ၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူအပေါ်ကလေးများနှင့်လူငယ်များ၏အပြုအမူကိုအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်စစ်ဆေးခြင်း။ ” Middlesex မှတာဝန်ယူခဲ့သည်။ NSPCC မှတက္ကသိုလ်နှင့်အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်တို့မှကလေးများကော်မရှင်နာ။
“ အပြစ်မတင်ပါနဲ့ ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဘို့ကလေးတစ်ဦး။ ဒါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ဂီတဗီဒီယိုတွေကိုဖွင့်အလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်, အွန်လိုင်းနေရာတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရှောင်ရှားရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ သည်အခြားကလေးတွေဟာရယ်မောသို့မဟုတ် bravado ဘို့ပေါ်မှာရှောက်သွား, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကလေးကဖြတ်ပြီးထိ မိ. လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ကတက်တက်ကြွကြွလည်းထုတ်ရှာကြံလိမ့်သင်တန်းလိမ့်မည်။ ရုံသာစောင့်ကြည့်မှသင်၏ကလေးသည်တားမြစ်ထား 'အဟောင်းကိုစကားကိုဝင်အဖြစ်အဘို့, ပိုသွေးဆောင်စေသည်တားမြစ်ထားအသီးအရသာငှက်ကလေး'' ။
၏လိုင်းများကိုသိမ်းဆည်းထားပါ ဆက်သွယ်ရေးပွင့်လင်း ဒါကြောင့်သင်က porn န်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးရန်ခေါ်ဆိုခများ၏သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး port ကိုဖြစ်ကြသည်။ ကလေးများသဘာဝလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်ထံမှလိင်အကြောင်းကိုစပ်စုဖြစ်ကြသည်။ အွန်လိုင်း porn လိင်မှာအကောင်းဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်တစ်ဦးအေးမြလမ်းနှင့်တူပုံရသည်။ ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုပွင့်လင်းရိုးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မသက်မသာခံစားရရင်တောင်လူငယ်တစ်လူတစ်ဦးအဖြစ် porn မှသင့်ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုအကြောင်းပြောနေတာစဉ်းစားပါ။
ကလေးများလိင်အကြောင်းကိုတဦးတည်းကြီးတွေဟောပြောပွဲမလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ အများအပြားပြောဆိုမှုများလိုအပ်ပါတယ် သူတို့ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပေါင်းဖြတ်သန်းအဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ။ တစ်ခုချင်းစီသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ရမည်၊ လိုအပ်လျှင်အကူအညီတောင်းပါ။ ဖခင်များနှင့်မိခင်များ ယနေ့ခေတ်နည်းပညာများ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်သူတို့၏ကလေးများအားပညာပေးခြင်း၌နှစ် ဦး စလုံးအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။
ယခင်လူမှုဗေဒပါမောက္ခ၊ စာရေးဆရာနှင့်မိခင်ဖြစ်သူဒေါက်တာဂေးလ်ဒင်းစ်သည်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြုပြင်ခြင်းကိုစတင်တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူမ၏ TEDx ဟောပြောချက်ကိုကြည့်ပါ။ သူနှင့်သူမအဖွဲ့သည်မိဘများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရန်ကူညီမည့်အခမဲ့အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးကိရိယာများကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ စကားပြောဆိုမှုမည်သို့ရှိမည်နည်း။ ကြည့်ပါ ယဉ်ကျေးမှု Reframed မိဘများအစီအစဉ်။
ဤစာအုပ်သည်“ Colette Smart ၏စာအုပ်အသစ်ဖြစ်သည်။သူတို့အဆင်ပြေသွားမှာပါ“ ဤစာအုပ်တွင်သင့်ကလေးများနှင့်သင်စကားပြောနိုင်သည့် 15 ဥပမာများပါရှိသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်တီဗွီအင်တာဗျူးသူအချို့နှင့်စာရေးသူနှင့်အဓိကအတွေးအမြင်အချို့မျှဝေထားသည်။
နှောင့်နှေးသင့်ကလေးကိုစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေးခြင်း နေသမျှကာလပတ်လုံးတတ်နိုင်သမျှအဘို့။ မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုသင်အဆက်အသွယ်နေဖို့နိုင်ပါတယ်ဆိုလို။ ကအလယ်တန်းကျောင်းဝင်ပေါ်စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူသင့်ကလေးကိုတင်ဆက်ဖို့မူလတန်းသို့မဟုတ်မူလတန်းကျောင်းအတွက်ခက်ခဲအလုပ်အတွက်အကျိုးကိုနဲ့တူပုံရသည်စေခြင်းငှါနေစဉ်, ကအတိုင်းလိုက်နာသောလများတွင်မိမိတို့၏ပညာရေးဆိုင်ရာမှီဖို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုစောငျ့ရှောကျ။ ကလေးတွေတကယ်အင်တာနက် 24 နာရီ-a-နေ့က access ကိုလိုအပ်ပါသလား? ကလေးများအွန်လိုင်းအိမ်စာတာဝန်တွေအများကြီးလက်ခံရရှိလိမ့်မယ်နေစဉ်, လို့ရပါတယ်ဖျော်ဖြေရေးအသုံးပြုမှုကိုပင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်တစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်မိနစ် 60 ဖို့ကန့်သတ်ခံရ? ရှိပါတယ် apps များအများကြီး အထူးသဖြင့်ဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ဖို့။ ကလေးများ2နှစ်နှင့်အားလုံးမှာဖန်သားပြင်ကိုမသုံးသင့်ပါတယ်အောက်မှာ။
ညဥ့်မှာအင်တာနက်ပိတ်ထားပါ။ သို့မဟုတျ, အလွန်အနည်းဆုံး, သင့်ကလေး၏အိပ်ခန်းထဲရှိဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်ဂိမ်းစက်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ ပြန်လည်အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိခြင်းသည်ယနေ့ကလေးများစွာတွင်စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်နေ့တာလေ့လာမှုကိုပေါင်းစပ်ရန်၊ ကြီးထွားရန်၊ သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုနားလည်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်စွာခံစားရရန်အတွက်သူတို့သည်အနည်းဆုံးရှစ်နာရီလုံးလုံးညလုံးအိပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏သားသမီးကြောင်းသိပါစေ porn Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံအားဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် နည်းပညာကုမ္ပဏီများ "ချိတ်" အသုံးပြုသူများ သူတို့ကိုပိုပြီးပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်သောအလေ့အထများကိုဖွဲ့စည်းရန်သူတို့ရဲ့အသိအမြင်မရှိ။ ဒါဟာအားလုံးသူတို့ရဲ့အာရုံကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများရောင်းချရန်နှင့်တတိယပါတီများနှင့်ကြော်ငြာရှင်များမှအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏အလိုဆန္ဒများနှင့်အလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးသတင်းအချက်အလက်မျှဝေပါ။ ဒါဟာအဖြစ်မကြာမီသူတို့ပျင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်အဖြစ်အသုံးပြုသူများအားကိုပိုမိုအဘို့အပြန်လာမယ့်ထားရန်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း, လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများကဲ့သို့စွဲလမ်းဖြစ်စေသည်။
ဆန္ဒပြမှုများနှင့်အတူဖြေရှင်းခြင်း: ကလေးများပထမဦးဆုံးမှာဆန္ဒပြခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကလေးအတော်များများသူတို့ကသူတို့အပျေါမှာညဘက်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနယ်နိမိတ်ပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့မိဘများချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနှင့်ပြီ။ သငျသညျ '' စာသား '' သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကသူတို့ကိုစွန့်ခွာအားဖြင့်ဆိုမျက်နှာသာသင့်ကလေးလုပ်နေကြသည်မဟုတ်။
အပြစ်ရှိကြောင်းမခံစားရဘူး သင်၏သားသမီးနှင့်အတူမှနျကွောငျးဝနျခံသောအရေးယူဘို့။ သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးသည်သင်၏လက်၌အလွန်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ကလေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ၏ဒီစိန်ခေါ်မှုကာလ navigate ကူညီရန်အသိပညာနှင့်ပွင့်လင်းသောစိတ်နှလုံးနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်နက်။ ဒီမှာ အကြံ ကလေးတစ်ဦးစိတ်ရောဂါကနေ။
မကြာမီက သုတေသနလုပ်ငန်း တစ်ဦးတည်း filter များအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းမှသင်တို့၏သားသမီးကာကွယ်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည်မိဘများ၏လမ်းညွှန်ကိုပိုမိုအရေးကြီးသောအဖြစ်ဆက်သွယ်ရေးပွင့်လင်း၏လိုင်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။ access ကိုမှ porn ခက်ခဲပြုလုပ်ခြင်းသို့သော်အမြဲအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးက start ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာချပြီးထိုက်သည် filter များ အားလုံးအင်တာနက်ကိရိယာများပေါ်တွင်နှင့် စစ်ဆေးနေ တစ်ဦးအပေါ် ပုံမှန်အခြေခံ သူတို့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။ စိစစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်အကြံဥာဏ်များအကြောင်းကို Childline သို့မဟုတ်သင်၏အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အဘယ်အရာကို Apps ကပကူညီပေးနိုငျသနညျး
ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပံ့ပိုးမှုရွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Ikydz မိဘများကသူတို့ကလေးတွေ '' အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ ပြခန်းဂါးဒီးယန်း တစ်ဦးသံသယဖြစ်ဖွယ်ပုံရိပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကလေး၏ device ကိုပေါ်သည့်အခါမိဘများအားအသိပေးပါ။ ဒါဟာ sexting န်းကျင်အန္တရာယ်များနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာ။
တခဏ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ app ကို အကြောင်း, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားန့်သတ်ချက်နှင့်ထိုကန့်သတ်ရောက်ရှိသည့်အခါအလုပ်မလုပ်လက်ခံရရှိသည်။ အသုံးပြုသူများသည်သိသိသာသာ margin က၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုလျှော့မတွက်တဲ့သဘောထားကိုရှိသည်။ ဒီ app ကိုအခမဲ့ဆင်တူပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာလူတွေကိုလမ်းတစ်လျှောက်အကူအညီဖြင့်၎င်းတို့၏ဦးနှောက် reboot ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာကိုခေါ်မယ့် Brainbuddy.
ဤတွင်အသုံးဝင်သောဖြစ်စေခြင်းငှါအချို့နဲ့အခြားအစီအစဉ်များနေသောခေါင်းစဉ်: ပဋိညာဉ်မျက်လုံး; အခေါက်; NetNanny; Mobicip; Qustodio မိဘထိန်းချုပ်ရေး; WebWatcher; က Norton မိသားစုကို Premiere; OpenDNS မူလစာမျက်နှာ VIP; PureSight Multi ။ ဤတွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည် စာရင်း PC World မှဇူလိုင်လ 2019 မှဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုသည် The Reward Foundation မှထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဤထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်းမှဘဏ္benefitာရေးအကျိုးအမြတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မရရှိပါ။
စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးစာအုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်ထူးဆောင်သုတေသနအရာရှိဂယ်ရီ Wilson မှဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အဲဒါမှန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် "Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ” ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောမိဘများ၏လမ်းပြဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလူငယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်ရာပေါင်းများစွာသောပုံပြင်များပါသည့်သင်၏ကလေးများဖတ်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောစာအုပ်လည်းဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့သည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်အင်တာနက် porn ကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
ဂယ်ရီသည်သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သူများအတွက် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် (သို့) လှုံ့ဆော်မှုစနစ်အားအလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းပြသောအလွန်ကောင်းသောသိပ္ပံဆရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာအုပ်သည်သူ၏လူကြိုက်များအပေါ်တစ် ဦး update ကိုဖြစ်ပါတယ် TEDx 2012 မှပြောဆိုပါ။
ဒီစာအုပ်ကို Kbackle (သို့) Kodle ဒါမှမဟုတ် audio book အဖြစ်နဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏“ ရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုအားအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်၎င်းသည်အောက်တိုဘာ 2018 တွင်နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည်။compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ“ ဘာသာပြန်များကိုဒတ်ခ်ျ၊ အာရဗီနှင့်ဟန်ဂေရီဘာသာစကားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားသူများကိုမူပိုက်လိုင်းဖြင့်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။
2 ။ ကလေးစိတ်ရောဂါအထူးကု Dr. Victoria Dunckley ၏စာအုပ်“သင့်ရဲ့ကလေး၏ဦးနှောက် Reset"နှင့်သူမ၏အခမဲ့ ဘလော့ဂ် ကလေး၏ဦးနှောက်အပေါ်အလွန်အကျွံမျက်နှာပြင်အချိန်သက်ရောက်မှုရှင်းပြပါ။ အရေးကြီးတာကကြောင့်မိဘများကသူတို့ကလေးသည်နောက်တဖန်လမ်းကြောင်းအပေါ်အရကူညီဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဘို့အစီအစဉ်တစ်ခုထွက်သတ်မှတ်။
ဒေါက်တာ Dunckley porn အသုံးပြုမှုကိုခွဲထုတ်ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်မထားဘူး။ သူမသည်သားသမီးများ၏အကြောင်းကို 80% သူမကထိုကဲ့သို့ ADHD, စိတ်ကြွရောဂါ, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်စသည်တို့ကိုအဖြစ်သူတို့ရောဂါနှင့်အဘို့ဆေးခဲ့ကြသည့်စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းရှိသည်မဟုတ်ဘဲသူမ '' အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် syndrome ရောဂါခေါ်ဆိုသောအရာကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးရှုမြင်ကပြောပါတယ်။ '' ဤသည်ရောဂါကဤဘုံစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းများစွာ၏ရောဂါလက္ခဏာများအတုယူ။ အဆိုပါစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုမကြာခဏအများဆုံးကိစ္စများတွင်န်းကျင်3ရက်သတ္တပတ်၏အကာလများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချ / ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်။
သူမ၏စာအုပ်မိဘများကလေး၏ကျောင်းနှင့် ပူးပေါင်း. တစ်ဦးခြေလှမ်း-by-step မိဘများ '' လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာကဒီလုပျနိုငျကိုဘယ်လိုရှင်းပြထားသည်။
"ပန်ဒိုရာရဲ့ box ကိုဖွင့်လှစ်သည်။ ယခုငါဘာလုပ်သလဲ? " GAIL Poyner စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကလေးများ options များမှတစ်ဆင့်ထင်ကူညီရန်အသုံးဝင်သောဦးနှောက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်လွယ်ကူသောလေ့ကျင့်ခန်းပေးပါသည်။
"ကောင်းသောရုပ်ပုံများ, မကောင်းသောရုပ်ပုံများ"Kristen Jensen တို့က GAIL Poyner ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကောင်းတစ်ဦးစာအုပ်ကလေးသည်ဦးနှောက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
မရကလေးတွေသည်။ ကလေးများကာကွယ်ခြင်း။ Liz Walker ကရောင်စုံဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအလွန်ငယ်ရွယ်သားသမီးတို့အဘို့ရိုးရှင်းတဲ့စာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏ကျန်းမာရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအကြောင်း Reward Foundation ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များကိုလေ့လာပါ။
Anti-ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုမေတ္တာကနေ Excellent ကအခမဲ့အကွံဉာဏျအခုတော့ဒါဟာ Stop! မိဘများကာကွယ်ပါ
သစ်မူးယစ်ဆေးရဲ့ Fight porn နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုပြောပြရန်ကဘယ်လို။
ဤတွင်အရေးပါသောအသစ်ဖြစ်၏ အစီရင်ခံစာ မှ အင်တာနက်ကို Matters အင်တာနက်လုံခြုံမှုနှင့်ပိုက်ကွန် surfing စဉ်လုံခြုံသင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူဒီဂျစ်တယ်မူပိုင်ခွင့်အပေါ်။
မှအကွံဉာဏျ အွန်လိုင်း porn အကြောင်းကို NSPCC.
စကော့တလန်အဆက်အသွယ်မိဘများအတွက် ကလေးများ 1st.
ကဲ့သို့သောအဓိကအခမဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူ website အများစုဟာ yourbrainonporn.com; RebootNation.org; PornHelp; NoFap.com; Fightthenewdrug.org; သည်ကြီးမြတ်သော Go နှင့် အင်တာနက်က Porn စွဲ လောကရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းဘာသာရေးအသုံးပြုသူများသည်ရှိသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သူများကြုံတွေ့ခဲ့ကြပြီးသူတို့ညှိအဖြစ်ယခုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်အရာကိုစိတ်ကူးတစ်ခုရရှိရန်မှာကြည့်ဖို့မိဘများအတွက်အသုံးဝင်သော။
ကဲ့သို့သောယုံကွညျအခြေစိုက်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်လည်းရရှိနိုင်ကောင်းသောအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ် သစ်စာသမာဓိပွနျလညျဖွ ကက်သလစ်များအတွက်, ယေဘုယျအားဖြင့်ခရစ်ယာန်များအတွက် အဝတ်အချည်းစည်းအမှန်တရားစီမံကိန်း (ဗြိတိန်) ဘယ်လို Porn အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် (အမေရိကန်), နှင့် MuslimMatters အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ခြင်း၏သူတို့အဘို့။ ကျနော်တို့အကူပေးနိုငျမဆိုအခြားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်-based စီမံကိန်းများကိုရှိပါတယ်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ Spectrum Disorder
သင်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားပြီးတဲ့သူကလေးတစ်ဦးရှိပါက, သင်သည်သင်၏ကလေးသည် neurotypical ကလေးများထက်ညစ်ညမ်းအပေါ်ချိတ်ဆက်ခံရမှုတစ်ခုမြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်မှာဖြစ်အံ့သောငှါသတိပြုမိဖို့လိုတယ်။ သင်သည်သင်၏ကလေးသည်လှိုင်းပေါ်မှာရှိစေခြင်းငှါ, သံသယရှိလျှင်, ထိုသူတို့အားရှိသည်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆပါလိမ့်မယ် အကဲဖြတ် ဖြစ်နိုင်လျှင်။ အထူးသဖြင့် ASD (သို့) အထူးသင်ယူမှုလိုအပ်ချက်ရှိသောလူငယ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းမှုများအတွက်စာရင်းဇယားများတွင်အချိုးအစားမမျှတစွာပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောလူ ဦး ရေ၏ 1% နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လိင်ကျူးလွန်သူများ၏ 33% သည်ရောင်စဉ်တွင်ရှိနေသည်သို့မဟုတ်သင်ယူမှုအခက်အခဲများရှိသည်။
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါသည်မွေးဖွားခြင်းမှအာရုံကြောဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားများအကြားတွင်ပိုမိုများပြားသောအခြေအနေဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသမီးများမှာလည်းထိုရောဂါရှိနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်ဖတ်ပါ porn နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ; မိခင်တစ်ဦးရဲ့ပုံပြင်ကို; နှင့် အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ: စစ်မှန်သောသို့မဟုတ်အတု?
UK အစိုးရသည်ကလေးသူငယ်များအားအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကာကွယ်ရန်ကတိကဝတ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ အစိုးရ ၀ န်ကြီးတစ် ဦး ထံမှစာ အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကလေးများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏အတွင်းရေးမှူးထံသို့။
အသက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (Digital Economy Act, Part 3) ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကုမ္ပဏီများအား 18 နှစ်အောက်ကလေးများ၏စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ရန်ပိုမိုထိရောက်သည့်အသက်စစ်ဆေးခြင်းဆော့ဝဲလ်ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ဘလော့ဂ် အသေးစိတ်အတွက်အကြောင်း။ စည်းမျဉ်းအသစ်များသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များနှင့်စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်များပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှမှ ပို. ထောက်ခံမှု
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ မည်သည့်ဧရိယာရှိလြှငျသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကဒီဘာသာရပ်အပေါ်ဖုံးလွှမ်းရန်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လာမယ့်လအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပိုပြီးပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲလိမ့်မည်။ (စာမျက်နှာ၏ခြေမမှာ) ကြှနျုပျတို့၏က e-သတင်းလွှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်းများမှတက်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက်တွစ်တာ (@brain_love_sex) ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။
မိဘများ၏လမ်းညွှန်ကိုနောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့် 11 နိုဝင်ဘာ 2019 ဖြစ်သည်